Ingabe Isifuba Se-asthma Siwufuzo? - Ipulatifomu Yesiguli Yomhlaba Wonke Yokungezwani Nezitho Zomoya
Ikhaya>Ingabe Isifuba Sama-Asma Sisebenza Emndenini?
Ingabe Isifuba Sama-Asma Sisebenza Emndenini?Ipulatifomu Yesiguli Yomhlaba Wonke Nesifo Somoya2021-03-24T12:27:17+01:00
Isifuba somoya, isimo samaphaphu esingapheli esithinta imigwaqo yomoya, singenzeka kubantu bayo yonke iminyaka. Kwezinye izimo, izimpawu ze-asthma zingaba mnene futhi zilawulwe kahle ngemithi ye-asthma. Kwabanye, izimpawu ziba nzima kakhulu futhi zingaba nethonya elikhubazayo empilweni yansuku zonke nasemsebenzini. Isifuba somoya nezinye izimo ze-atopic zingasebenza emndenini, okusho ukuthi uma unomlando womndeni waleso simo, usengozini yokusihlakulela.
Alikho ikhambi lalesi simo se-bronchial, kepha singalawulwa ngempumelelo ngezindlela zesimanje zokwelapha, futhi ucwaningo luyaqhubeka nokuveza okuningi ngezimbangela zesifuba somoya.
Qhubeka ufunde ukuthola ukuthi ngabe i-asthma iyisakhi zofuzo noma imvelo nokuthi ngabe likhona yini iqiniso ngombono wokuthi i-asthma ingasebenza emindenini.
Ingabe i-asthma izakhi zofuzo?
Kuyaqondakala ukwazi ukuthi yini ebangela i-asthma. Kuyisifo esiyinkimbinkimbi kanti ngenkathi imbangela yangempela ingakaziwa, ucwaningo lukhombisile ukuthi zombili izici zofuzo nezemvelo ziyabandakanyeka.
Izingane ezinabazali abane-asthma maningi amathuba okuthi nabo babe nazo. Eqinisweni, uma umzali oyedwa enesifuba somoya, kukhona 25% chance nengane yabo izokwenza kanjalo. Uma bobabili abazali bakho banayo, le ngozi inyukela kuma-50%.
Ithonya lezakhi zofuzo liqokonyiswa ku izifundo ezingamawele, okuthole ukuthi i-asthma kungenzeka ukuthi yenzeke kubantu abanezihlobo ezisondelene nezofuzo nalesi simo. Ngamawele afanayo, amathuba amawele womabili anesifo somoya aphakeme kunamawele angafani. Kepha kunjalo 75% kungenzeka kunokuba kuqinisekiswe u-100%, kugqamisa ukuthi izici zemvelo nazo zidlala indima.
Ingabe lukhona ufuzo lwesifuba somoya?
Ngenkathi i-asthma iyizakhi zofuzo, izici zemvelo zidlala indima nazo. Ngokungafani nezinye izimo ezizuzwe njengefa, ayikho single ufuzo lwesifuba somoya. Futhi asikho isiqinisekiso sokuthi uzoyithuthukisa uma abazali bakho babenayo, njengoba ingeqa isizukulwane. Ucwaningo lwezofuzo lukhombe okuhlukahlukene izakhi zofuzo zesifuba somoya, noma izakhiwo zofuzo, ezidlala indima enkulu. Lokhu kufaka phakathi i-DPP10, GRPA ne-SPINK5.
I-Genomics isifundo sokuthi izakhi zofuzo zakho zisebenzisana kanjani nemvelo. Ucwaningo lwe-genomic luyaqhubeka futhi lunikeza ukuqonda okubalulekile ekuxakaneni kwesifuba somoya nezici ezahlukahlukene ezihilelekile ekukhuleni kwaso. Izici zemvelo ezingakhuphula ubungozi bokuthi kube nesifuba somoya kungaba ngaphakathi nangaphandle. Isibonelo, ukuvezwa intuthu kagwayi, izinga lomoya elingesihle, ukungcola, amazinga okushisa abandayo kanye nomswakama ophezulu konke kungandisa ubungozi bakho.
Ucwaningo kukhombisa ukuthi ukuhlanganiswa kwezakhi zofuzo eziningana ezihlangana komunye nomunye nezici zemvelo kungakhuphula amathuba okuba nesifuba somoya.
Izici zofuzo zesifuba somoya
Izici eziningana zofuzo zingakubeka engcupheni enkulu yokuhlaselwa yisifuba somoya.
Umlando womndeni wakho
Isifuba somoya nomlando womndeni
Izifundo eziningi zithole ukuthi i- umlando womndeni kungaba yingozi ekuthuthukiseni i-asthma. Uma omunye wabazali bakho noma izingane zakini enesifuba somoya, nawe kungenzeka ukuthi ube naso. Uma bobabili abazali bakho benesifuba somoya, khona-ke le ngozi iyanda. Kungenzeka futhi ukuthi ube nezinye izimo ezihlobene ne-atopic, njenge-eczema, i-hay fever noma i-allergies yokudla.
Lokhu akusho ukuthi nakanjani uzoba nesifuba somoya uma amanye amalungu omndeni wakho enaso, ukuthi nje izakhi zofuzo zikubeka engcupheni enkulu. Futhi akusho ukuthi ngeke usithuthukise lesi simo uma izihlobo zakho zonke zingenayo i-asthma.
Isifuba somoya nobulili
Ucwaningo luthole ukuthi isifuba somoya yiso kuvame kakhulu kubafana abancane, kanti amantombazane maningi amathuba okuthi athinteke ngemuva kokuthomba. Abanye ochwepheshe bakholelwa ukuthi lokhu kungabangelwa ukuthi izindlela zabahamba ngezomoya zabafana zibe zincane kunemigwaqo yomoya yamantombazane, okwandisa ubungozi bokushaywa umoya.
Ngeminyaka engaba ngu-20, isilinganiso se-asthma siyefana kwabesifazane nabesilisa. Kodwa-ke, ngeminyaka engaba ngu-40, abesifazane banamathuba amaningi okuthi bakhule i-asthma yabantu abadala kunamadoda. Kunobunye ubufakazi bokuthi abesifazane banamathuba amaningi okuba nesifuba somoya esibi kakhulu kunamadoda.
Ingabe i-asthma yofuzo iyelapheka?
Azikho izinhlobo ze-asthma, kungaba yisifuba somoya noma isifuba sasemsebenzini esibangelwa ukuvezwa intuthu, uthuli noma ezinye izinto ngomsebenzi wakho, ezilapheka ngokuphelele. Kodwa-ke, kunemithi eminingi esebenzayo kanye nezindlela zokuphila ezingasetshenziswa ukuphatha ngempumelelo nokwelapha izimpawu zakho.
Udokotela wakho noma umhlengikazi wesifuba somoya uzosebenzisana nawe ekwakheni uhlelo lokwelashwa yisifuba esivumelana nawe. Le ndlela eyenzelwe ukusebenza isebenza kahle, ngoba awekho amacala amabili esifuba somoya afanayo futhi angathinta abantu ngezindlela ezahlukene.
Izindlela zokwelapha zesimanje ze-asthma zigxila ekuzameni ukuqeda izimpawu nokuzivimba ukuthi zingenzeki. I-asthma inhalers ijwayele ukubekelwa lokhu. I-reliever inhaler (evamise ukuba luhlaza okwesibhakabhaka) ingasetshenziswa ukunciphisa izimpawu ze-asthma ezenzekayo, kanti i-preventer inhaler (evame ukuba nsundu) inqunyelwe ukuvimbela izimpawu ezenzekayo. Kwezinye izimo, ungahle unikezwe i-inhaler eyenza kokubili, eyaziwa njenge-inhaler yokuhlanganisa.
Udokotela wakho uzokunikeza izeluleko zokuthi ungazithatha kanjani futhi nini izi-inhalers zakho. I-inhaler ensundu ijwayele ukusetshenziswa nsuku zonke, kanti kungadingeka ukuthi usebenzise i-inhaler eluhlaza okwesibhakabhaka ngezikhathi ezithile, ikakhulukazi njengoba izimpawu zakho ze-asthma zilawulwa kangcono.
Kwesinye isikhathi kunqunywa amaphilisi, ikakhulukazi uma ama-inhalers kuphela engazilawuli ngokuphelele izimpawu zakho.
Kukhona nezinyathelo zokuphila ezingokoqobo ongazithatha, ngokubambisana nokusebenzisa ama-inhalers akho nokuphuza imithi njengokuholwa ngudokotela wakho.
Ukuvivinya umzimba njalo - uma nje i-asthma yakho isilawulekile, ukuzivocavoca umzimba njalo kuyasiza
Ukudla ngendlela enempilo - kuyalulekwa ukudla okunomsoco okunezithelo nemifino eningi; ukukhuluphala ngokweqile kungabhebhethekisa isifuba somoya
Ukungabhemi - ukubhema kuyinto ecasulayo futhi ukuyeka ukubhema kunganciphisa imvamisa nobukhulu bezimpawu zakho.
Ngokuqondene nekusasa, kungenzeka ukuthi ukwanda kolwazi lofuzo nocwaningo kungaholela ekwakhiweni kwemithi eyenziwe ngezifiso kakhulu futhi i-pharmacogenetics yesifuba somoya. Lokhu kusho ukuthi ukwelashwa kwesifuba somoya kungalungiswa kangcono kuwe njengomuntu, nokuthi imininingwane yakho yezofuzo ingasetshenziselwa ukubikezela kusengaphambili ukuthi uzophendula kanjani ekwelashweni okuthile.